Zimbabwe Nanaiky niala ihany i Mugabe
Nametra-pialana omaly ny filoha Robert Mugabe nitantana an’i Zimbabwe nandritra ny 37 taona.
Faty olona sesilany tato ho ato Tokony hampandinin-tena lalina antsika,hoy ny CRAM
Sambany teo amin’ny tantaram-pirenena taorian’ny fanjanahantany no nisy olona an-jatony mahery « naringan’ny valanaretina pesta » teto Madagasikara. Miara-manaiky ny rehetra fa tao anatin’izao Repoblika faha-4 izao no betsaka olona maty indrindra na tamin’ny alalan’ny « bois rond »
Kajy hampandresena ny HVM Halefa mialoha ny fifidianana depiote…
Miha lalina ny kajikajy politika sy ny kajikajim-pifidianana ankehitriny. Kendrena hatao amin’ny volana martsa na ny aprily 2017 ny fifidianana solombavambahoaka,
Nahita tsirony tamin’ny fitondrana Tsy te ho very seza Rajaonarimampianina
Efa isan’andro ny fitokanan-javatra sy ny fisehoana vahoaka ataon’ny filoham-pirenena Hery Rajaonarimampianina. Zara aza misy zavatra kely vita,
Vondrona Eoropeanina Mitaky hatrany fifidianana tsy misy fanilikilihana
Lohahevitra lehibe 6 no noresahan’ny vondrona eoropeanina sy ny governemanta Malagasy omaly teny Mahazoarivo dia ny toe-draharaha politika eto Madagasikara, ny sehatry ny toerakerana, ny varotra, ny fanampiana avy amin’ny vondrona eoropeanina, ny filaminana ary ny zon’olombelona.
Vondrona MAPAR Kamboty velon-dray aman-dreny
Miha mitombo isa ankehitriny ireo olon’ny vondrona Mapar manontany tena ny amin’ny paikady hiatrehana ny 2018.
Raharaham-pirenena, fifidianana Manara-maso akaiky ny vondrona Afrikanina
Mitsidika an’i Madagasikara nanomboka omaly alatsinainy ny delegasionina avy amin’ny vondrona Afrikanina tarihan’i Ramtane Lamamra,